Otu esi choputa uzo kacha mma maka ahia ahia nke ndi ahia | Martech Zone
Otu esi ahọta ọwa kacha mma maka atụmatụ nkwado ndị ahịa gị
Thursday, August 29, 2019 Fraịde, Ọgọstụ 30, 2019 Ashwini Dave
Site na ọbịbịa nke ntụle azụmaahịa, nyocha ịntanetị, na mgbasa ozi mmekọrịta, ọrụ ndị ahịa gị na-akwado ugbu a dị mkpa maka aha njirimara gị na ahụmịhe ndị ahịa gị n'ịntanetị. N'ikwu eziokwu, ọ baghị uru na mbọ ị na-agba ma ọ bụrụ na nkwado na ahụmịhe gị adịghị.
Akara maka ụlọ ọrụ dị ka aha mmadụ. Na - enweta aha gị n ’ime ihe siri ike ike.
Ndị ahịa gị na akara gị na loggerheads na ibe ha oge niile?
N'agbanyeghị na ụlọ ọrụ gị na-elo ezé ya n'ime ngalaba Ọrụ Ndị Ahịa.
N'agbanyeghị afọ ojuju na mgbe gabigara ihe ndị ahịa na-atụ anya ya.
N'agbanyeghị na ndị niile free (na oké ọnụ) giveaways na iguzosi ike n'ihe omume ị na-Shell si ọ bụla ugbu a na mgbe ahụ.
Ọ bụrụ na azịza maka ihe ndị a niile bụ “ee,” ị ga-alaghachi na mbadamba ịbịaru wee gagharịa na nke gị usoro ọrụ ndị ahịa. Iduzi gị, ka ịghọta “ihe mere” tupu “otú” na anya na ihe na-eme gị ahịa na ịchụda n'elu ka “ọchịchịrị” n'akụkụ. Lee ihe atụ abụọ nwere ike ime:
Kpụrụ nke 1: You're Na-eme Oké Ukwuu
Dị ka counter-kensinammuo dị ka ọ pụrụ iyi, e nwere ihe dị ka na-eme "nke ukwuu" mgbe ọ na-abịa ahịa ọrụ. Na-agbanye mgbọrọgwụ maka ihe niile 'bara uru,' anyị ghọtara na ọ gaghị ekwe omume ịnye nkwado na ọwa ọ bụla ma ọ bụ ịnọ ebe niile 'n'echiche. Shortdalata dị mkpụmkpụ nke ụmụ mmadụ na oke ego na-akwụ ụgwọ dị ka isi ihe kpatara nke a. Iji mezuo nke ahụ, mgbagha na-ekwu na ọ ka mma ma ọ bụrụ na ịhọrọ ọwa kwesịrị ekwesị nke nwere uche maka ndị ahịa gị.
Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ, tụgharịa na chanel na-adịghị arụ ọrụ maka gị. Mana nke kachasị, were amara. Okwu na-arụ ọrụ nke ọma. Nke a bụ ndepụta nke usoro ị ga - eme iji jide n'aka na ndị ahịa gị agaghị enwe iwe na afọ ojuju (n'ihi mgbanwe mberede na nke a na-apụghị izere ezere nke ga-abịa):
Banye n'ime gị ahịa mindset ibute ihe ịma aka / nkụda mmụọ ha nwere ike iche ihu. Site na ịnakwere ụzọ ọmịiko, ị nwere ike belata ihe mgbu ha ma dozie nsogbu ha n'ụzọ dị irè.
Mejuputa na-agbanwe site na nkebi kama iwepu ngwaọrụ nkwado n'otu oge. Otu ụzọ isi mee nke a bụ site na ịnye nhọrọ nkwado ndị ọzọ wee gosi ya n'elu ikpo okwu tupu iwepu ụdị nkwado ndị ahịa ọ bụla.
Na-ahọrọ ihe ndị ọzọ nhọrọ imepụta ihe na nkeonwe maka nkwado ndị ahịa ozigbo emechiri channelụ ndị ahụ. Akwụkwọ ntuziaka na-arụ ọrụ nke ọma ijide ndị ahịa aka ma debe nhọrọ niile dịịrị ha.
Ptmụta a ọzọ styledị nkwurịta okwu na eziokwu mgbe a bịara n’ịkụziri ndị ahịa ihe banyere ọwa enyemaka dịnụ ha nwere. Dịka ọmụmaatụ, nke a bụ ihe akara ngosi Kinsta metụtara ndị ahịa ha:
Ọrụ nkwado na-achọkarị nlezianya, itinye uche na nyocha. Idebe nkwado naanị na ntanetị na-enye anyị ohere ka mma nyere gị aka idozi weebụsaịtị gị na ọsọ ọsọ na ịrụ ọrụ nke ọma, ebe ndị injinia anyị nwere ike ilekwasị anya ike ha niile na idozi nchegbu nkwado gị site na obere ọnụọgụ nke nkwụsị na nkwụsị nwere ike. Nke a, n’aka nke ya, pụtara na a na-edozi arịrịọ nkwado gị ọsọ ọsọ.
Chee echiche nkwado ndị ahịa dị ka njem ma chọpụta isi ihe na-emetụ n'ahụ nke na-agwa ndị ahịa banyere mgbanwe ndị e mere na usoro nkwado. Ndị a na-agụnye ihe atụ dịka ibugharị ibe ọdịda ọdịda gaa na nnọkọ obodo ebe ndị ahịa nwere ike ịchọta ihe ọhụụ na-akpali akpali na mmepe na - aga n'ihu na - aga n'ihu ma ọ bụ na - abụghị.
Takeaway Key: Okwu a na-ekwu na “ihe ka mma karịa” anaghị adịkarị mma ma a bịa n’iji ngwa ọrụ enye ndị ahịa ọrụ dị egwu. Mgbe ụfọdụ, nhọrọ ole na ole na-elekwasị anya na-arụ ọrụ nke ọma na ngwa ngwa. Ọzọkwa, ọ bụ ihe ezi uche dị na ịduzi ndị ahịa gị na 'mgbanwe' a na-eme site na nkwukọrịta doro anya na nke ọma ma na-enye nhọrọ nkwado ndị ọzọ.
Ihe atụ 2: Not Na-adịghị Elekwasị Anya “ezuru” na “ọjọọ” Ahụmahụ Nkwado Ndị Ahịa.
Ndị ahịa na-ahụkarị ụlọ ọrụ n'anya maka onyinye ya pụrụ iche, ọnụahịa asọmpi, ịdị mfe nke ịdị mma, na ngwaahịa dị mma, na ihe ndị ọzọ. Ọ dị obere na "ezigbo ndị ahịa ahịa" na-abịa na ndepụta nke ihe kpatara ha ji ahọrọ akara A karịa akara B.
Otú ọ dị, na-akpali mmasị, ọjọọ ahịa ọrụ na-abụkarị otu n’ime ihe ndị bụ isi mere ndị ahịa ji akwụsị itinye aka na ika. Fọdụ ihe atụ na-abata n'uche:
Ndị ahụ na-adịghị agwụ agwụ ogologo oge na ekwentị site n'aka ndị na-eweta ọrụ ndị ahịa.
Akpa ahụ ị tụfuru n'ụzọ ị na-aga ezumike.
Ime ụlọ nkwari akụ ahụ na-adịghị mma nke mebiri bọmbụ na kaadị akwụmụgwọ gị.
Ndepụta ahụ na-aga n'ihu… Ọ na-ekwughị na ihe atụ ndị a niile na-eme maka ahụmịhe ndị ahịa dị egwu nke chọrọ enyemaka ozugbo.
N'ezie, otu nnyocha nke Kọmitii Ndị Na-ahụ Maka Ndị Ahịa hụrụ nkọwa abụọ na-akpali akpali nke kwesịrị ịbụ akụkụ nke atụmatụ ụlọ ahịa nke ụlọ ọrụ ọ bụla: Ọ na-ekwu na:
Customerstọ ndị ahịa anaghị ewulite ntụkwasị obi; na-ebelata mgbalị ha — ọrụ ha na-aghaghị ime iji dozie nsogbu ha — na-arụ.
Ahịa Kpọtụrụ Ndị Ahịa
Ihe nke a pụtara bụ na uru ahịa gị ga-agbakwunye iji belata nchegbu ndị ahịa kama ịnye atụmatụ mara mma, nke na-abaghị uru.
Na-agbakwunye na nchọpụta mbụ, ọ na-ekwu, sị:
Ime ihe ụma na nghọta a nwere ike inye aka melite ọrụ ndị ahịa, belata ọnụ ahịa ndị ahịa, ma belata ọnụahịa ndị ahịa.
Takeaway Key: Ndị ahịa dị njikere ịbọ ọbọ n'ihi ọrụ ọjọọ karịa ụlọ ọrụ ụgwọ ọrụ maka ọrụ ka mma. Ọ bụrụ na akara gị echeghị n'ụkwụ ya ma belata akara azụ nke mkpesa ndị ahịa ahụ na-abawanye ụba, ọ ga-adaba na oke bekee - agaghị echekwa ọzọ.
Ajụjụ Ndị Bụ́ Isi A Ga-atụle Mgbe when Na-anabata Ọbịbịa “Onye Ahịa-nke Mbụ”
A bịa n’inye aka na inye ọmịiko n’ebe ndị ahịa gị nọ, enwere ajụjụ ụfọdụ dị mkpa chọrọ nyocha na nyocha:
Moredị Ajụjụ Gbasara Ajuju:
Kedu ndị bụ ndị ahịa gị?
Kedu ihe bụ mkpa ha / mkpa ha?
Nwere ike depụta nhọrọ dịgasị iche iche nke igwe mmadụ dị iche iche?
Moredị Ajụjụ Ndị Kachasị cjụ:
Site n'echiche ndị ahịa, olee "ọsọ ọsọ" ngwa ngwa ma a bịa n'ihe nzaghachi? Ọ bụ sekọnd 10, nkeji 5, otu awa, ka ọ bụ otu ụbọchị?
Kedu ụdị usoro ị kwesịrị iji dị ka ndabere nke ụdị ajụjụ / nchegbu. N'ụzọ bụ isi, ọ chọrọ ịkọwa n'etiti esemokwu chọrọ nkwado ekwentị na nsogbu enwere ike ịmekọrịta n'ịntanetị. Dịka, ihe gbasara ego chọrọ nkwado ekwentị maka mkpebi ngwa ngwa ma dị irè.
Ndụmọdụ bara uru: Mgbe ọ bịara ịghọta onye ahịa gị, were nke a dị ka isi mkpịsị aka:
Gee ntị n'ihe ndị ahịa gị na - agwa gị - mana ọ bụghị nke ọma.
Gbagwojuru anya? Ka anyị were otu ihe atụ. Ihe anyị na-ekwu bụ na ọ bụ ezie na ndị ahịa nwere ike ịrịọ maka nkwado ekwentị, ihe ha chọrọ bụ azịza ọsọ ọsọ. Iji mezuo nke ahụ, a na-atụ aro ka ndị otu nkwado gị na-enweta ọzụzụ nke nwere ike inyere ha aka ịme ngwa ngwa na ịza ajụjụ nke ndị ahịa.
Uru na ọghọm nke Ngwaọrụ Nkwado Ndị Ahịa dị elu: Ntuziaka Ndenye
Obi abụọ adịghị ya na ọ bụrụ na ndị ọrụ ndị ahịa, ụlọ ọrụ dị iche iche na-ahọrọ atụmatụ dị iche iche - dabere na mkpa ha, atụmanya ndị ahịa, nchegbu mmefu ego, na ihe ndị ọzọ. Na mgbakwunye, na plethora nke nhọrọ dị taa, ọ nwere ike ịme mgbagwoju anya ma sie ike ịsị nke kacha nta. Iji mee ka ihe dịrị gị nfe, anyị edepụtarala uru na ọghọm dị elu maka ụzọ enyemaka anọ ndị ahịa na-arụ taa, ya bụ:
Ọ bụ “Oku Kpọrọ” maka Inye Ahụmịhe Ndị Ahịa nke Na-enye Ọkụ?
Uru nke iji nkwado ekwentị:
Ọ bụ otu n'ime ụdị nhọrọ ndị ahịa kachasị ama ama n'etiti ụdị gburugburu ụwa.
Ọ bụ ụzọ nkwukọrịta kwụrụ ọtọ nke anaghị enye ohere ihie ụzọ ma ọ bụ nghọtahie ọ bụla.
Ọ na-ekwu okwu ozugbo banyere nsogbu ndị ahịa na mmetụta uche ya.
Ọ dị irè na-elekọta mgbagwoju anya na ihe ndị ọzọ ngwa ngwa na ndị ahịa nwere ike ihu.
Ọghọm nke iji ekwentị nkwado:
Ọ nwere ike ịpụta dị ka “ihe mgbe ochie” ma ọ bụ nke mgbe ochie ọkachasị maka ndị na-eto eto maka na ha chọrọ iji ekwe ntị ede ihe karịa ikwu okwu.
O nwere ike iduga oke nrụgide na nkụda mmụọ ma ọ bụrụ na ndị ahịa ahụ na-echere ogologo oge. Nke a na - eme ma ọ bụrụ na ndị ọrụ ahụ na - arụ ọrụ ma ọ bụ ọ bụrụ na ụlọ ọrụ anaghị arụ ọrụ.
Nka na ụzụ dịka ụgbụ nwere ike igbochi ndị ahịa ịkpọ oku maka enyemaka.
Inwe “Nzuzo” Do Nwere Ike Imebi Ihe Karịa Ihe Ọma?
Uru nke iji nkata nkwado:
Ọ na-enye mkpebi nrịba ama dị irè na - arụ ọrụ mgbe ụfọdụ dị ka 92% n'etiti ndị ahịa!
Ọ bụ ụzọ dị ọnụ ala karịa nkwado ekwentị ma rụọ ọrụ dị ka nnukwu ihe ọmụma.
Ọ na - enye ndị ọrụ / bọọlụ ikike isoro ọtụtụ mmadụ nwee mkparịta ụka n’otu oge. N'ezie, data site na CallCentreHelper na-atụ aro na gburugburu “70% nke ndị ọrụ nwere ike ijikwa mkparịta ụka 2-3 n’otu oge, ebe 22% nke ndị na-akwado ọrụ nwere ike ijikwa mkparịta ụka 4-5 n’otu oge. ”
Ọ na - enyere ụlọ ọrụ aka ịkwaa ọrụ ma nyekwa ahụmịhe na - eduzi karịa site na ijikọta atụmatụ ọdịnihu dịka chatbot na ịme nchọgharị n'otu n'otu.
Ọ na-enye ike ịdebe mkparịta ụka ahụ (ọ na-abụkarị site na dashboard) nke na-arụ ọrụ dị ka ntụnye aka maka ọdịnihu maka ndị na-azụ ahịa yana onye nnọchi anya ndị ahịa.
Ọ na-enye ụdị ikike dị ka ha nwere ike ịme ihe ọmụma bara uru (ewepụtara site na nkata nkata ndụ) dị ka omume ịzụ onye ọrụ, mkpesa gara aga, mkpali ndị na-azụ ahịa na atụmanya, wdg ma jiri ya nyefee ọrụ / onyinye ka mma.
Ọghọm nke iji nkata support:
Dabere na Kayako, nzaghachi ederede na-akparị ndị ahịa gị. 29% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu na ha na-achọta nzaghachi ederede na-akụda mmụọ, na 38% nke azụmahịa kwenyere.
O nwere ike ibute mkpebi na-eju afọ ma ọ bụrụ na chatbot enweghị ike ịza ajụjụ ndị ahịa ma mee ka onye ọrụ ahụ gaa na onye ọrụ. Dị ka o kwesịrị ịdị, ọ na-ewe oge karịa ma na-eduga na onye ahịa na-ewe iwe.
Ọ nwere ike ịmalite ngwa ngwa site n'ịhụ n'anya na ịba uru na-ewe iwe ma ọ bụrụ na ejirila ịkpọ oku nkata ma ọ bụ na-ejikarị ya.
Ị maara? Data site na MarketingDive na-ekwu na ndị mmadụ karịrị 55 na-ezo aka na telephonic nkwado na nyiwe ndị ọzọ.
Ozi bụ Ọkara Nkwukọrịta Ọhụrụ - Ka Ọ Bụ?
Uru nke iji nkwado email:
Ọ bụ otu n'ime usoro nkwukọrịta ọtụtụ ebe. N'ezie, data na-egosi na ndị mmadụ na-ezipụ 269 ijeri ozi ịntanetị kwa ụbọchị.
Ọ na-enye ụdị ikike izipu ajụjụ - abalị ma ọ bụ ụbọchị, ụbọchị 365 n’afọ.
Ọ na-enye afọ ofufo, ederede edere (maka enweghị okwu ka mma) maka ntụnyere n'ọdịnihu ka onye ọ bụla wee nọrọ n'otu ibe.
Ọ na - arụ ọrụ dị ka ohere iji jụọ ajụjụ yiri ya site na iji ihe eji arụ ọrụ bot.
Ọ na - enyere ụdị aka iso ndị ahịa nwee nkwukọrịta n’ụzọ pụrụiche nke ọma. I nwekwara ike ịgbaso na mkparịta ụka gara aga karịa mfe.
Ọghọm nke iji email nkwado:
O nwere ike iduga njehie na-adịghị mma. Dịka ọmụmaatụ, e zigara email a Amazon na ndị na-atụghị anya nwa ma ụfọdụ nwere nsogbu ọmụmụ! Dị ka ị pụrụ iche n’echiche, oké iwe nke ọhaneze nọ n’ọnọdụ ya kasị elu. Inyocha ego email na-akpaghị aka depụtara ọ bụla ugbu a na - mgbe ahụ bụ ihe dị mkpa iji zere nsogbu ndị dị ka ndị a.
Ọ na-ewe oge karịa na-akwadoghị nkwado ekwentị.
Ọ naghị enye mkpebi ajụjụ ozugbo dị ka ozi ịntanetị na-ewe ogologo oge ịzaghachi. Nke a bụ nnukwu ọjọọ dị ka Forrester Research na-ekwu na "41% nke ndị na-azụ ahịa na-atụ anya nzaghachi email n'ime awa isii."
Ọ chọrọ ọtụtụ nkà pụrụ iche dịka ike ịgụ ọgụgụ onye ọrụ ma gụọ n'etiti ahịrị. Nkwukọrịta okwu na-apụtachaghị adaba ma enwere ike ịgbagha. Na mkpokọta, ihe gbasara nkwukọrịta nwere ike ịfufu n’etiti ọtụtụ mgbanwe email.
Nkwado Social Media:
Havingnweta nnweta mmekọrịta ọhaneze n'ịntanetị bụ uru ma ọ bụ anegha?
Uru nke iji nkwado mgbasa ozi mmadụ:
Ọ na-enye ụzọ dịgasị iche iche nke ụlọ ọrụ nwere ike isi dozie nsogbu ndị ọrụ dịka nkwupụta post, mkparịta ụka nzuzo / ozugbo, na ozi otu. Ọ na - enyere aka ịme nyocha ahịa ma ghọta nke ọma onye ọrụ gị.
N'ịbụ onye ọha na eze site na okike, ọ na-enyere ndị ọrụ aka ịza azịza nye ajụjụ ha nwere ike ịnwe dịka mmadụ nwere ike izipu ya na mbụ. Dị nwere ike ịmepụta otu obodo na-ejikọ ndị nwere otu obi ma na-enyere aka ịza ajụjụ / nchegbu ha.
Ọ bụ n'ụzọ efu n'efu ma na-enye nnukwu ohere maka nzaghachi ndị ahịa.
Ọ nwere ike ịbụ nnukwu ohere maka ụdị iji merie ntụkwasị obi onye ọrụ site na ndị ahịa na-edenye ahụmịhe dị mma. Dị nwere ike iji ọchị na ihe okike na-edozi nsogbu ndị ọrụ! Skyscanner gosipụtara nke a n'ụzọ doro anya na ihe atụ egosiri n'elu.
O gosiputara ikike nke ulo oru igbanwe ma mekwaa ka oge di omimi dika idi oru na mgbasa ozi bu ihe di nkpa taa. A nnukwu gbakwunyere dị ka nnyocha site MarketingDive buru amụma na “Ndị dị afọ 25 na n'okpuru ịhọrọ usoro mgbasa ozi dị ka ụzọ kachasị mma ha si agwa ndị ahịa ozi. ”
Ọ na - enyere ndị ahịa aka ijikọ aka ma na - enyere aka iji wulite mmekọrịta dị mma yana ndị ọrụ.
Ọghọm nke iji nkwado mgbasa ozi mmadụ:
Ọ nwere ike imebi akara ngosi ma ọ bụrụ na a na-ahụ ọtụtụ post na-adịghị mma na ngalaba ọha dị ka Facebook, Twitter, wdg. Ime ihe n'eziokwu na ịbịa nwere ike inye aka belata mmebi ahụ ruo n'ókè kachasị elu.
Ọ na-ebute ihe egwu nke omume achọghị (dịka ịmaja / okwu mkparị) yana nwekwara ike ibute ihe egwu nchekwa dị ka nchapu ozi ma ọ bụ ịpị hacking
Ọ chọrọ nlekota oge niile na nzaghachi ozugbo iji zere ahịa ndị ahịa.
Echiche ndị na-emechi
Gwa ndị ọzọ gafere ihe ndị ahịa na-atụ anya dabara adaba iji nye ọgba aghara, igbu oge na mbọ, na ịkwụ ụgwọ dị oke ọnụ.
Mgbe a bịara n'ịhọrọ ezigbo nkwukọrịta ndị ahịa, ọ nweghị ụzọ ọ bụla ị ga-esi nweta akara ngosi. Ztù dị iche iche kwesịrị ịtụle ọtụtụ isi ihe dị ka akụrụngwa dịnụ, mmefu ego na oge mgbochi, ihe ndị ahịa chọrọ na atụmanya ndị ọrụ, wdg.
Site na ịnye enweghi nsogbu, enweghị nsogbu, ahaziri iche na ahụmịhe ndị ahịa bara uru maka onye ọrụ.
Site n'ịhụ na atụmatụ ndị ahụ anaghị efu ụlọ ọrụ - ego ma ọ bụ n'ụzọ ndị ọzọ.
Site na ịnye ndị bara uru ọ bụla uru bara uru - na-agbakwunye ndị ọrụ ụlọ ọrụ na ndị ahịa na ndị ọrụ ụlọ ọrụ na ndị isi obodo n'ozuzu ya.
Ejiri ozi a niile, oge eruola ịgagharị n'okwu ahụ ma nyefee ahụmịhe nke onye ahịa - nke na-atọ ụtọ ma na-akụziri ndị ahịa ihe niile n'otu oge. In banyela? Anyị chere otú ahụ.
Tags: ika ahankwado emailelekọta mmadụ mgbasa ozi na-akwado
Ashwini nwere obi uto banyere Business, entrepreneurship, E-commerce, na Digital Marketing. Ya na ya na aru oru Nweta dị ka ọkachamara ịzụ ahịa dijitalụ. Ọ bụ mkpụrụ obi nweere onwe ya na onye mmụta nwere mmụta na-etinye oge ya na onwe ya, hụrụ n'anya otu oge, egwu, yana ikiri & igwu egwuregwu. Ọ bụ ihe riri ahụ n'oké osimiri na n'okporo ụzọ ịbụ onye njem na-akpali akpali iji nweta ahụmịhe ọhụụ ka ọ na-ele ndụ anya dị ka ọrụ aka anyị.
The Ultimate Guide to launching a Subscription Video Ọrụ
Kedu Ọrụ Ndị Dị Mkpa na Ngalaba Ahịa Ahịa nke Taa?